Teodosia Okoh - Wikipedia
(Redirected from Theodosia Okoh)
Na theodosia Salome Okoh yɛ oman agyapadeɛ, ɔkyerɛkyerɛni ne ɔnwenefoɔ ɔyɛɛ Ghana frankaa wɔ afe 1957. Wɔwoo no ayɛwohumɔmɔ da ɛtɔ so du-mmiɛnsa, afe apem aha nkron aduonu mmienu ɛna owuiɛ wɔ oforisuo bosome da ɛtɔ so du nkron afe mpem mmienu ne du num no mu. Ɔdii dwuma titire wɔ agorɔ 'hockey' mu ma ɛbaa nyam.
1 Mfeɛ edi kan ne nwoma sua
4 N'abrabɔ mu Nsɛm
5 Ne Wuo
Mfeɛ edi kan ne nwoma sua
Ne din a wɔde woo no ne theodosia Salome Abena Kumea Asihene wɔ Effiduase. Kane sofo panin a na ɔda baseli asɔre a na ɛwɔ Ghana ne ɔbaapanin Dora Asihene a wɔn baanu firi Asuogyaman mansini a ɛwɔ Ghana Apueɛ mantam mu. Na ɔtɔ so nnan wɔ mmɔfra nnwɔtwe mu. Ɔhyɛɛ mfitiaseɛ sukuu wɔ Asante Efiduasi na ɔtoa so wɔ Basel Mission Middle, ne akyerɛkyerɛfoɔ nteteeɛ sukuu wɔ agogo ne Achimota sukuu a ɔkɔwie mfeɛ mmiɛnsa wɔ ade nwene mu.
Berɛ a Ghana nyaa fawohodie firi aborɔfo no nsam no, wɔbɔɔ dawuro faa frankaa foforɔ ho. Ɔde ne deɛ a na w'nwene no kɔeɛ ma Ghana manpanin a ɔdi kan a ɔfrɛ no Kwame Nkrumah gye to mu wɔ ɔbɛnim da a ɛtɔ so nsia, afe apem aha nkron aduonum nson.
Ɔkyerɛmu wɔ nkitahodie mu sɛ: meyɛɛ m'adwene wɔ ahosuo mmiɛnsa kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ ne abunu ɛnam nnoɔma pa a ɛwɔ Ghana nsaase so a onyame ahyira so. Kɔɔkɔ no gyina hɔ ma wɔn a wɔde wɔn kra to hɔ maa Ghana nyaa ne fawohodie. Nsoroma a ate ne ho gyina hɔ ma pere a na abibiman pere sɛ wɔn bɛdi wɔn so. Theodosia yɛ ɔbaa tetenani a ɔdi kan wɔ Ghana hockey kuo no mu akyire yi ɔbɛyɛɛ kuo no panin bɛboro mfeɛ aduonu. Ne mmerɛ so na Ghana tumi nyaa kwanya kɔɔ ewiase hockey ne Olympic agorɔ kansie mu. Ohene Djan too ne din ''the Joan of Arc of Ghana hockey ɛfiri sɛ, ɔno na ɔsɔre gyee Ghana hockey sii hɔ berɛ a na mmarima no nyaa ɔpɛ pa sɛ ɔbɛma agorɔ no akɔ n'anim, ne saa nti no, ɔde ne din too hockey agorɔprama no so wɔ mfeɛ mpem mmienu no mu. Ɔyɛɛ panin wɔ Ghana agodie atwerɛfoɔ mfdi kan a ɔfrɛ no Kwame Nkrumah gye to mu wɔ ɔbɛnim da a ɛtɔ so nsia, afe apem aha nkron aduonum nson.
Na theodosia Salome Okoh yɛ oman agyapadeɛ, ɔkyerɛkyerɛni ne ɔnwenefoɔ ɔyɛɛ Ghana frankaa wɔ afe 1957. Wɔwoo no ayɛwohumɔmɔ da ɛtɔ so du-mmiɛnsa, afe apem aha nkron aduonu mmienu ɛna owuiɛ wɔ oforisuo bosome da ɛtɔ so du nkron afe mpem mmienu ne du num no mu. Ɔdii dwuma titire wɔ agorɔ 'hockey' mu ma ɛbaa nyam
N'abrabɔ mu Nsɛm
Enoch Kwabena okoh a na ɔyɛ panin wɔ amanyɔ adwuma kɛseɛ wɔ kwame Nkrumah amamuo pɛn so wɔ afe apem aha nkron aduosia na ɔware no. Wɔn woo mmɔfra baasa: E. Kwasi Okoh, Stanley Kwame Okoh ne Theodosia Amma Jones- Quartey
Owui oforisuo bosome du nkron, afe mpem mmienu ne du-num wɔ NarhBita ayaresabea a ɛwɔ Tema wɔ berɛ a ɔyare kakra wɔ ne mfeɛ aduokron mmienu. Ɔman Panin John Dramani Mahama hyɛɛ sɛ yɛntu frankaa nyinaa mfa wiem nna mmiɛnsa firi oforisuo bosome aduonu baako a ɛyɛ benada de abɔ n'abaso. Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ nkɔmmɔdie so, Edward Omane Boamah kyerɛ sɛ, ɔyɛ de abɔ n'abaso wɔ ne Gaanani soronko a ɔyɛ. Na ɔkyerɛɛ sɛ, aban hyɛ no animuonyam wɔ ɔpɛpa ɔde aboa ɔman no nkɔsoɔ. Nkaedum a ɔman no anya afiri ewiase afanan wɔ frankaa a ɔnweneɛ agya ne diberɛ wɔ abakɔsɛm sɛ onipa titire wɔ Ghana abakɔsɛm mu. N'adom akyɛdeɛ, ɔpɛpa ne n'ahofama wɔ n'adwumayɛ mu ma Ghana bɛkɔ so ayɛ nkuranhyɛsɛm ama Ghanafoɔ na aboa ayɛ nkaeɛ wɔ ɔman no adeyɛ mu.
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodosia_Okoh&oldid=19754"